Imithetho elishumi yokuchwetheza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Zininzi izinto ezinefuthe kunye nokuchonga umgangatho womsebenzi wokuchwetheza. Uninzi lwazo aluzihoyi ngenxa yokungazi kwaye ekugqibeleni oku kugqibe ekuthatheni umthwalo kwisiphumo sokugqibela. Namhlanje sisuka kwisandla sika URob carney Siza kuvavanya iingongoma ezilishumi ezinomdla kakhulu ekufuneka sizikhumbule xa sisebenza ngokuchwetheza kuyo nayiphi na iprojekthi.
Ndiyakukhumbuza ukuba le mithetho-siseko okanye iingcebiso aziphelelanga ngokuxhomekeke emsebenzini esiwenzayo ziya kuba zanele okanye zincinci ngokwaneleyo. Yonwabele!
1 Ukukhangela ngokungagqibekanga? Yiphephe!
2 Kulumkele ukusebenzisa ngokugqithileyo iicalligraphic okanye ifonti yeskripthi
3 Xa ujongene nemali enzima kakhulu, kunqande ukusebenzisa naluphi na uhlobo lochazo
4 Uluhlu lwakho lwemithombo kufuneka lilinganiselwe
5 Lumka ungazikhohlisi ii-caps ezincinci
6 Sukusebenzisa ubhalo olukekeleyo
7 Konke ngoonobumba abakhulu? Ngoba?
8 Sebenzisa imibala eguqulweyo ukulungiselela iinjongo zobuhle, hayi
9 Awuyi kudibanisa iiserif
10 Imigca emiselweyo
Ukukhangela ngokungagqibekanga? Yiphephe!
I-Kerning yinto ebalulekileyo nakweyiphi na uyilo kungonakalisa umsebenzi olungileyo ukuba asazi ukuba singalufumana njani uninzi lwayo. Uninzi lwee-softwares zisibonelela ngokuzenzekelayo ngamaxabiso ezithuba kodwa zama ukungazinzisi la maxabiso, khumbula ukuba uyazi ngaphezu kwayo nayiphi na isoftware. Zama ukuthatha ixesha ukuseta isikhewu kubume bakho, kokubini phakathi koonobumba (Kerning) naphakathi kwamagama (Ukulandela umkhondo). Kwi-Adobe InDesign unolawulo lwala maxabiso kwaye ukuwatshintsha kuya kufuneka uye kuphela kwimenyu yokuKhetha, iiYunithi kunye nokongezwa, ukunyuswa kwekhibhodi, uKerning / ukuKhangela.
Kulumkele ukusebenzisa ngokugqithileyo iicalligraphic okanye ifonti yeskripthi
Ezi fonti zinxulunyaniswa ngokuzenzekelayo neengcinga ezinje ngobuhle okanye ubucukubhede, kodwa ubukho bazo abusoloko bunezinto ezifanayo kwaye kuyimfuneko ukuba sicamngce ngeemfuno zomsebenzi wethu ngaphambi kokusebenzisa ezinye iindlela. Ngokubanzi, ezi zisombululo zihlala zithanda ukwenziwa xa zibonakala ngobukhulu obukhulu, ngamagama amafutshane kunye nokubonisa ulwazi ngokuthe ngqo. Nangona kunjalo akusoloko kunjalo. Ewe kunjalo, kwezi ndawo apho kukho izixa ezikhulu zesicatshulwa, ulibale olu khetho kuba ngokuqinisekileyo luya kukhokelela kukungafundeki kunye nokuphazamiseka ekufundeni nasekuwuqondeni umyalezo.
Xa ujongene nemali enzima kakhulu, kunqande ukusebenzisa naluphi na uhlobo lochazo
Unokuba nomfanekiso omnandi okanye uburhabaxa obunomtsalane kodwa ukuba uxakeke kakhulu kwaye unezinto ezininzi ezahlukileyo, kungcono ukhethe imvelaphi elula okanye ungasebenzisi ngqo nawuphi na umbhalo obekiweyo. Ungalibali ukuba into esiyikhangelayo ngaphezu kwazo zonke izinto kukusebenza kunye nokuthumela umyalezo ngokucacileyo. Ukuba umfundi ufumanisa kunzima ukufumana umyalezo, eyona nto isengqiqweni kukwenza kukujonga ucoceko kunye nokulula ngemvelaphi eqinileyo okanye imibala eqaqambileyo.
Uluhlu lwakho lwemithombo kufuneka lilinganiselwe
Siyazi ukuba kukho amakhulu eefonti ongathanda ukuzisebenzisa kuyilo nakwindlela oyila ngayo, kodwa inyani kukuba ukusebenzisa ngaphezulu kwesithathu kunokuphazamisa kwaye kuphazamise umfundi. Le yenye yezona mpazamo zinzulu sinokuthi sizenze kubuchwephesha kuba oko kuthetha ukuphazamiseka komyalezo. Ngokusengqiqweni kuya kufuneka ukhumbule ukuba kukho ukungafani, kodwa zona kanye, ngaphandle. Ukuba uyathandabuza ngenani lamagama oza kuwasebenzisa, uyazi, angadluli kwisithathu!
Lumka ungazikhohlisi ii-caps ezincinci
Kukho iintlobo ngeentlobo zeefonti eziza neekhephu ezakhelweyo ezincinci, zisebenzise kwaye musa ukubhenela ekwenzeni inkohliso, oku akusebenzi kwaye kuchasene nokwenziwa. Ukuba unengqondo yokubandakanya ii-caps ezincinci kwisihloko, ungalibali ukukhetha ifonti ebabandakanya, kukho inani elikhulu lamagama asimahla kunye nomgangatho obabandakanya.
Sukusebenzisa ubhalo olukekeleyo
Uninzi lweefonti ezigqwethayo ngesandla ukubanika ukugqiba oku-italic, nangona kunjalo oku kuthoba nje inkangeleko yabo. Kuya kufuneka uzame ukusebenzisa iifonti ezinohlobo lwazo olukekeleyo. Inyani yile yokuba kunzima kakhulu ukufumana ifonti engenayo inguqulelo yayo engqinelanayo, kodwa ukuba le yimeko yakho, yilahle kwaye ukhethe enye enohlobo lwayo olusemthethweni oludityanisiweyo. Ungayihoyi "Indalic italic" ukhetho lwe-Indesign ngenxa yakho.
Konke ngoonobumba abakhulu? Ngoba?
Ukuba uthatha isigqibo sokubhala ibhloko engaphezulu okanye engaphantsi yesicatshulwa ngoonobumba abakhulu uya kufumana ilahleko yokufunda kuphela. Nangona banokuba yenye indlela elungileyo kwaye babonelele ngokongezwa kobuhle ngamanye amaxesha, emzimbeni wakho wokubhaliweyo baya kusebenza kuphela njengeyona ndlela ifanelekileyo yokwazisa isiphithiphithi kulwakhiwo lwakho. Ingqondo yethu ifunda igama elibhaliweyo ngegama, hayi ileta ngoonobumba, kwaye kwinkqubo yokufunda ikhokelwa kukuphindaphindeka kwabalinganiswa abanyukayo nabahlayo. Ukubonelela ngesicatshulwa sonke kunokuba ngumceli mngeni kunye nomzamo ongafunekiyo.
Sebenzisa imibala eguqulweyo ukulungiselela iinjongo zobuhle, hayi
Kubonakalisiwe ukuba xa siguqula imibala yeetekisi zethu kwaye sikhetha isisombululo seeleta ezimhlophe kwimvelaphi emnyama, esikwenzayo kukudinwa iliso lomfundi kuba simnyanzela ukuba ajolise kakhulu kumbala omhlophe kwaye oku kubangela konke ezintathu ukuba zenziwe zenziwe zasebenza njengokubonakalayo kwamehlo ethu ngokulinganayo. Ewe oku kunokusetyenziswa kumatyala athile kunye nakwiitekisi ezingxineneyo.
Awuyi kudibanisa iiserif
Kukho imithombo yokudibanisa kakuhle kakhulu kunye neminye eyahluke ngokupheleleyo. Ukudibanisa iiserif ezimbini ezahlukeneyo kwibhlokhi enye kuya kungalingani kuphela kulawulo lobuchwephesha. Oku kukwabhekisa kweminye imithombo. Kuya kufuneka uphephe ukudibanisa iifonti ezimbini ezifanayo. Ukuba ugqibe kwelokuba usebenzise ifonti yeserif kwisihloko, sebenzisa ifonti yesans yomzimba. Ngokwenyani, yinto efuna uvavanyo ukufumana esona sisombululo sisiso.
Zama ukungasebenzisi imigca emide yokubhaliweyo. Sibhekisa kububanzi bekholamu okanye ubude bomgca wokubhaliweyo. Ukuba inde kakhulu okanye, ngokuchaseneyo, imfutshane kakhulu, iya kubiza umfundi ngakumbi ukwenza izivakalisi kwaye oku kunokuchaphazela ukuqonda komyalezo. Ubude obulungileyo buphakathi kwama-45 nama-75 abalinganiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Imithetho elishumi yokuchwetheza
NGOKUGQWESILEYO .. UKUZE UFUNE I-AKHAWUNTI
Phendula u-ERNESTO YEJAS